14 ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်တိုးတက်မှုများ | Martech Zone
၁၄ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်တိုးတက်မှုများ
တနင်္လာနေ့မတ်လ 2, 2015 Douglas Karr
ဘေးဖယ်ကနေ တုံ့ပြန်သောအီးမေးလ်တင်းပလိတ်များအီးမေးလ်နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းများစွာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရှိသည့်အနေဖြင့်ဈေးကွက်ဝေငှသူများက၎င်းတို့ဖြန့်ဝေနေသောသတင်းစကားနှင့်နည်းပညာကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးအမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်
ဤတွင်အီးမေးလ်စျေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောနည်းပညာတိုးတက်မှု (၁၄) ခုရှိသည်
အချိန်နှင့်တပြေးညီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း Cross-channel ကိုဒေတာအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
Big ဒေတာ သတင်းရင်းမြစ်များသည်အီးမေးလ်ဖြင့်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်မည့်အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။
တိုးတက်လာသော HTML ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဇိုင်းနှင့်အီးမေးလ်များပေးပို့ပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
Marketing ကိုအလိုအလျောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တိုးမြှင့်ပြန်လာကြည့်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါ်ဆိုမှုများ - လုပ်ဆောင်ရန် ဘာသာရပ်လိုင်းများအတွက်သာ။ ကြီးမြတ်ပွင့်လင်းနှုန်းထားများ generate ပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအရာ repurposing နှင့်အကြောင်းအရာ curation သင့်ရဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူတန်ဖိုးကိုပါလိမ့်မယ်။
Micro- ပစ်မှတ်ထား သည်အခြားဝဘ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံပြီး segment နှင့် personalization နှင့်အတူ။
preference ကိုစင်တာများ သုံးစွဲသူများကိုအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။
စမတ်အီးမေးလ်ဖောက်သည်များ ဦး စားပေးနှင့်စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထအပေါ်အခြေခံပြီးဆက်လက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အီးမေးလ်ပို့ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဆိုပါ funnel ၏အောက်ခြေတွင် conversions ကိုကျော်လွန်ပြီးတိုးချဲ့လိမ့်မည်နှင့်မှာအထင်အမြင်အောင်မြင်ကြပါလိမ့်မည် အဆိုပါ lemb ၏ထိပ်.
လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများနှင့်အတူအီးမေးလ်စိစစ်အတည်ပြုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် DMARC.
Tags: 2015ကတော့၏အောက်ခြေအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှမခေါ်စည်းလုံးသောအီးမေးလ်နည်းဗျူဟာctaအီးမေးလ်နှင့်လူမှုရေးအီးမေးလ်က client များအီးမေးလ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအီးမေးလ် hashtagအီးမေးလ်အီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး infographicအီးမေးလ်ဘုန်းကြီးများအီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်အီးမေးလ်လုံခြုံရေးအီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းများhashtags ကိုအရာအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် tools များစာတိုပေးပို့ရေးမဟာဗျူဟာmicro- ပစ်မှတ်ထားpreference ကိုစင်တာများအကြောင်းအရာ repurposingလုံခွုံရေးlemb ၏ထိပ်ဝတ်စရာ
သင် Facebook တွင် Call-To-Action ခလုတ်ကိုသင်ဖန်တီးပြီးပြီလား။